Mitady soba toniandahatsoratra miteny anglisy any Azia-Pasifika ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2021 4:44 GMT
Mitady toniandahatsoratra mpanampy hiasa any Azia-Pasifika hisahana ny famoahana tantara nosoratana na nadikan'ny mpandray anjara amin'ny teny Anglisy ny Global Voices (GV).
Ny andraikitry ny soba toniandahatsoratra:
Manitsy ny tantara nosoratan'ireo mpandray anjara mba hamoahana izany ho an'ny mpamaky manerantany. Matetika ny toniam-paritra mahalala tsara ny lohahevitra sy ny zavamisy no manitsy voalohany ny tantara.
Mahay miteny Anglisy tsara na manana fahaizana miteny Anglisy tsara
Manana traikefa amin'ny fanitsiana lahatsoratra sy vaovao amin'ny teny Anglisy
Manana fifandraisana amin'ny aterineto mizotra tsara
Vonona hiara-hiasa amin'ny GV 15-20 ora isa-kerinandro
Manana fahaizana miasa na matihanina amin'ny fiteny hafa, indrindra ny Shinoa
Fikambanana manerantany virtoaly ny Global Voices. Ny ekipan'ny toniandahatsoratra miasa tapak'andro no motera mampihodina ny efitrano famoaham-baovao Global Voices izay miara-miasa amin'ireo mpandray anjara sy mpandika teny mpilatsaka an-tsitrapo eran'izao tontolo izao mba hanasongadinana ireo tantara sy fomba fijery izay tsy aseho amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra iraisam-pirenena.
Mifanaraka amin'ny oran'ny faritra eo anelanelan'ny UTC / GMT + 3 sy UTC / GMT + 10 ny fepetra ara-jeografika mifandraika amin'ity tolotrasa ity ankehitriny sy amin'ny hoavy. Aza hadinoina fa tsy manana birao na foibe hita maso ny Global Voices. Tokony mahay mandamina tsara ny fandaharam-potoanan'izy ireo manokana ary miasa amin'ny tontolo virtoaly feno sy vonona ny hanao dia iraisam-pirenena ireo kandida.
Antenaina hiasa tapak'andro araka izay ora maha-mety azy ny toniandahatsoratra mpanampy, ary horaisina ho toy ny mpiasa tsy miankina.
Mandefasa CV amin'ny mailaka sy taratasy filazalazana ny fahavitrihanao amin'ny teny Anglisy izay manasongadina ny asanao ary manazava ny antony mahatonga anao ho ilay kandida mendrika hiasa ato amin'ny Global Voices amin'ny jobs@globalvoices.org, miaraka amin'ny lohahevitra: Global Voices Subeditor: [ny anaranao]. Amin'ny 11:59 ora alina ora ATSINANANA (GMT -4) ny 31 Mey 2021 ny fe-potoana farany fandraisana anjara.